TOP 10 món ăn sáng cho bé 1 tuổi mẹ làm siêu nhanh | Vbid.vn - Vbid.vn
Bạn đang đọc: TOP 10 món ăn sáng cho bé 1 tuổi mẹ làm siêu nhanh | Vbid.vn in vbid.vn
TOP 10 món ăn sáng cho bé 1 tuổi mẹ làm siêu nhanh | Vbid.vn
Nwa dị afọ 1 bụ oge ọ ga-achọ ka ọ nweta ọtụtụ ihe na-edozi ahụ dị mkpa iji nyere aka mmepe ya. Isiokwu na-esonụ ga-ewebata nri nri ụtụtụ iri kacha elu maka ụmụaka dị afọ 1 nke ndị nne na-eme ngwa ngwa.
1 1. Nwa nri ụtụtụ na pancakes
1.1 1.1. Ndụmọdụ maka ịkwadebe pancakes ngwa ngwa
1.2 1.2. Nri ndị ọzọ jikọtara ọnụ mee pancakes
1.3 1.3. Ihe ọṅụṅụ nwere ike jikọta ya na pancakes
2 2. Nri ụtụtụ maka ụmụaka nwere achịcha dị mma
2.1 2.1. Kuki
2.2 2.2. Achịcha custard
2.3 2.3. dumplings
2.4 2.4. Akwa tart
3 3. Nwa nri ụtụtụ na achịcha na jam, peanut butter
4 4. Nri ụtụtụ nwa na achịcha na akwa
5 5. Nri ụtụtụ nwa na achịcha na anụ
6 6. Nri ụtụtụ nwa na porridge
7 7. Nri ụtụtụ maka ụmụaka nwere efere noodle
8 8. Nri ụtụtụ maka ụmụaka nwere noodles ma ọ bụ pho
9 9. Nri ụtụtụ maka ụmụaka nwere akwụkwọ nri agwakọta, àkwá na anụ
1. Nwa nri ụtụtụ na pancakes
Nri ụtụtụ maka ụmụ ọhụrụ nwere pancake abụghị ihe ọhụrụ nye ọtụtụ ndị nne. Pancake bụ achicha dị mfe ịme, dị mfe ijikọta ụdị ụtọ na ihe dị iche iche, yana mfe imeri ụmụaka. N’ihi na dabere na mmasị nwa gị, ị nwere ike họrọ kpamkpam ọkacha mmasị gị ihe na-agwakọta. Iji nyere gị aka imeju nri ụtụtụ gị na pancakes, ebe a bụ ụfọdụ ndụmọdụ dị mma na ụdị, ihe na-edozi ahụ ị nwere ike ịkwadebe iji nye ụmụ gị nri ụtụtụ na-atọ ụtọ, ụtọ na nke na-edozi ahụ. Ka anyị gbakọọ izu.
1.1. Ndụmọdụ maka ịkwadebe pancakes ngwa ngwa
Nne nwere ike ime pancake batter n’abalị gara aga, debe ya na ngwa nju oyi ma wụsa ya n’ụtụtụ.
Ị nwere ike iji ntụ ọka pancake agwakọtara nke ọma dị na ụlọ ahịa ma ọ bụrụ na ị na-arụsi ọrụ ike ma enweghị oge iji mee nke gị.
Echiche nke nne chọrọ ka ụmụ ya nwee mmasị na pancakes dị ka, nwere ike ịkwadebe ihe eji eme ihe na mgbede, iji mee ka ha dị jụụ na refrjiraeto.
Jiri ohere dị ka mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri dị n’ime ụlọ iji jikọta ya na pancakes na-agbanwe agbanwe.
Inwe mmanụ aṅụ na ụfọdụ jams dị njikere bụ ihe abụọ na-ewu ewu nke nwere ike iji pancakes ma ọ bụ achịcha mee nri ụtụtụ, nke dị nnọọ mma. Mama kwukwara banyere iji mmanụ aṅụ eme ihe. Ụmụaka karịrị otu afọ nwere ike iji mmanụ aṅụ mana ndị na-erubeghị otu afọ enweghị ike. N’ihi na na mmanụ aṅụ, e nwere ụfọdụ nje bacteria na-adịghị emerụ ndị okenye ma ọ bụ okenye ụmụaka, ma na-emerụ ụmụaka na-erubeghị otu afọ n’ihi na ha etobeghị digestive usoro.
1.2. Nri ndị ọzọ jikọtara ọnụ mee pancakes
Ọ bụrụ na ụtọ nnu na-amasị nwa gị : Ị nwere ike ịkwadebe ụfọdụ ihe ndị kwesịrị ekwesị dị ka àkwá (maka ighe), minced beef (e ghere eghe), minced anụ ezi (maka ịme shumai ma ọ bụ ighe), cheese … maka nwa gị iji pancakes mee ihe. Ị nwekwara ike ịkwadebe ngwa ngwa salad mmanya mmanya dị mfe ma ọ bụ salad avocado ka nwa gị rie ọnụ iji nwetakwuo eriri ma kpalie ụtọ uto.
Ọ bụrụ na nwa gị na-amasị ụtọ ụtọ : mmanụ aṅụ ma ọ bụ jam bụ nhọrọ mbụ nke dị mfe imeri ụmụaka. Tụkwasị na nke ahụ, nne nwekwara ike ịkwadebe ụfọdụ bred peanut, bọta na-enweghị nnu na-efesa ya na obere shuga aja aja ma ọ bụ caramel, mmiri ara ehi condensed, yogọt; mkpụrụ osisi ọhụrụ dị ka banana, apụl, pears, … maka ụmụaka iji.
1.3. Ihe ọṅụṅụ nwere ike jikọta ya na pancakes
Ihe ọṅụṅụ mkpụrụ osisi dị mfe ma dị ngwa ime, ị nwere ike ịkwadebe maka nwa gị ka ọ rie nri ụtụtụ na pancakes dị ka ihe ọṅụṅụ oroma, lemonade mmanụ aṅụ, kumquat, ihe ọṅụṅụ mkpụrụ osisi passion, wdg. Ị nwere ike itinye ụfọdụ mkpụrụ osisi chia iji jikọta ọnụ iji mee ka ọ dị mfe. Gbaa mbọ hụ na nwa gị na-enweta eriri zuru oke.
Ị nwere ike inyekwu nwa gị yogọt ka ọ ṅụọ?
Smoothies bụkwa nhọrọ dabara adaba mgbe ejikọtara ya na nri ụtụtụ pancake. Banyere ire ụtọ nne nwere ike ịkwadebe ngwa ngwa dị ka ube oyibo, strawberry smoothie, mango smoothie, banana + a ṅara n’ọkụ ahụekere smoothie, sapoche smoothie,…
2. Nri ụtụtụ maka ụmụaka nwere achịcha dị mma
N’ezie, ọtụtụ ndị nne anaghị enwe ekele maka nri ụtụtụ a kwadebere n’ụzọ dị otú a. N’ezie, n’agbanyeghị na ọ dị mfe, ijikọta achịcha dị mma na ụfọdụ nri na ihe ọṅụṅụ ndị a kwadebere ngwa ngwa nwere ike inye nwa gị nri ụtụtụ na-edozi ahụ ọ chọrọ.
Biscuits dị ka bisikiiti mmiri ara ehi, ọka bali crackers bụ otu kuki nwere ahụike nke ndị nne nwere ike iji kwadebe nri ụtụtụ maka ụmụ ha. Iji họrọ achicha dị mma, ị kwesịrị ịṅa ntị na ihe ndị dị na nkwakọ ngwaahịa ahụ, zere ịhọrọ ụdị nwere nnukwu shuga na ọtụtụ ihe mgbakwunye iji mepụta ụfụfụ ma ọ bụ crunch.
Nri ụtụtụ nwa ọhụrụ nwere bisikiiti ga-abụ ihe na-edozi ahụ mgbe nne na-akwadebe mmiri ara ehi ma ọ bụ cheese na obere mkpụrụ osisi ma ọ bụ smoothie ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ.
2.2. Achịcha custard
E nwere ọtụtụ ndị nne na-esire ụmụ ha achịcha ka ha na-eri mgbe niile. Ya mere, ndị nne na-ejikwa usoro ntụziaka ka esi eme achịcha sponge n’ụlọ iji kwadebe nri ụtụtụ maka nwa gị. Pancakes nwekwara ọtụtụ ụzọ isi mee na atọkwa. Ndị nne nwere ike ịkwadebe achịcha ụtọ ma ọ bụ sponge dị ụtọ, ya na mkpụrụ osisi a mịrị amị ma ọ bụ akwụkwọ nri iji gbanwee uto nwa ọhụrụ nke ọma. Ọ bụrụ na ịnweghị oge ime ya, ị nwekwara ike zụta ya n’ụlọ nri ndị a ma ama ka ị nweta achịcha na-atọ ụtọ ma dị mma maka nwa gị.
Ka ike ghara ịgwụ ha na nri zuru ezu maka nri ụtụtụ, yana kuki, ndị nne nwere ike ịkwadebekwu mmiri ara ehi, yogọt, mmiri ara ehi soy, smoothies, na mkpụrụ osisi maka ụmụ ha iji.
Dumplings maara nke ọma na nchịkọta nri nri ụtụtụ Vietnam anyị. Ndị nne nwekwara ike ịhọrọ ụdị achicha a iji gbanwee nri ụtụtụ maka nwa ọhụrụ. Maka ịdị mma, ị nwere ike dozie ya n’abalị gara aga wee kpoo ya ọzọ n’ụtụtụ ka nwa gị jiri ya mee ihe.
Ugbu a, uzommeputa maka ime dumplings dịkwa oke ọgaranya, ọtụtụ n’ime ndị na-arụsi ọrụ ike na kichin nwere ike ime ya. Ọzọkwa, ntụ ntụ ntụ ntụ ntụ ntụ dịkwa n’ụlọ ahịa na n’ahịa, nke mama nwere ike zụta ngwa ngwa dị ka uzommeputa iji mee. Ndochi ahụ dịkwa ọgaranya, dabere na mmasị gị, ị nwere ike ịme anụ dị mfe minced na ndochi yabasị ma ọ bụ njuputa dị ụtọ dị ka agwa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, tapawa uhie uhie iji mee nwa gị ụtọ.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ime ya, ị nwere ike ịzụta dumplings emebere site na ụdị ole na ole a ma ama iji kwadebe nri ụtụtụ maka nwa gị, nke dịkwa ngwa ngwa na adaba.
Maka nri ụtụtụ na-edozi ahụ na dumplings, ndị nne kwesịrị ijikọta mmiri ara ehi, mmiri ara ehi soy, yogọt na mkpụrụ osisi maka nwa ọhụrụ iji.
2.4. Akwa tart
Achịcha akwa bụkwa otu n’ime achịcha ndị dị mfe imeri ụmụaka. Tart akwa adịghị esi ike ime. Ndị nne nwere ike ịkwadebe ya site na ụbọchị gara aga iji mee ka ọ dị jụụ, n’ụtụtụ echi ya nwere ike were ya maka nwa ọhụrụ iji mee ihe. Maka ịdị mma, ị nwere ike ịzụta sọl achicha emebere na ebe a na-eme achịcha iji belata oge ịsa achịcha.
Tart akwa nwere abụba na ụtọ, yabụ biko jikọta ha na nri ụtụtụ nwa gị maka ọmụmụ nke ọma ma ọ bụ mkpụrụ osisi maka nwa gị ka ọ were mee ka uto na nri dị mma.
3. Nwa nri ụtụtụ na achịcha na jam, peanut butter
Achịcha na jam kwadebere nke ukwuu ngwa ngwa. Nke a bụkwa nri nri ụtụtụ na-ewu ewu maka ụmụaka, ọkachasị ndị na-amasị ụtọ na jam.
Achịcha eji jam kwesịrị iji achịcha ọka, achịcha oat ga-adị mma karịa iji achịcha ọcha.
Jam dị ụtọ nke ị nwere ike ịkwadebe maka nwa gị dị ka marmalade wet jam, strawberry jam, cherry jam, kiwi jam, wdg. Jams ndị a niile nwere ike ime mama ma ọ bụrụ na o nwere oge, ma ọ bụrụ na o nweghị, enwere ike zụta ya na ya. ụlọ ahịa ọ bụla.
Na mgbakwunye na jam, ndị nne nwekwara ike ịkwadebe achịcha na mmiri ara ehi ahụekere ma ọ bụ bọta na-enweghị nnu ma ọ bụ cheese nke a fesa na mkpụrụ shuga na-acha aja aja ole na ole, nke na-emekwa ka nwa ahụ nwee mmasị nke ukwuu.
Kwadebe nri ụtụtụ dị mma nke nwere achịcha na jam, họrọ ọtụtụ smoothies ma ọ bụ ihe ọ juiceụụ utoojoo iji dozie uto ma tinye vitamin C maka ụmụ gị.
4. Nri ụtụtụ nwa na achịcha na akwa
Achịcha na akwa bụ nri nri ụtụtụ ọdịnala, enwere ike iji lụso ọkụ ọgụ mgbe enweghị oge iji dozie efere nri ụtụtụ siri ike maka ụmụaka. Maka iji nwa gị na-atọ ụtọ ma dị mma, ị ga-ahọrọkwa achịcha oat, cereal, rye, na mkpụrụ osisi agbakwunyere ma ọ bụ mkpo.
Nsen a ga-eji achịcha mee ihe nwere ike ịbụ akwa e ghere eghe, omelet dị mfe ma ọ bụ akwa a na-agbagharị agbagharị ma ọ bụ akwa chara acha.
Ndị nne kwesịrị ịkwadebe ụmụaka nwere smoothies ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ, mkpụrụ osisi ọhụrụ maka nri ụtụtụ na achịcha, akwa.
5. Nri ụtụtụ nwa na achịcha na anụ
Maka achịcha na anụ nne, ị nwere ike iji ogbe achịcha sitere na ọka, ọka wit ma ọ bụ rye.
Anụ ejiri achịcha mee n’ụlọ ka ọ dị mfe ma dị ngwa mana ọ ka na-edozi ahụ ma na-atọ ụtọ, enwerekwa ọtụtụ ụzọ isi kwadebe. Nne nwere ike ime anụ sautéed site n’abalị gara aga, ma ọ bụ anụ ezi shumai dịka ọmụmaatụ. Ndị a bụ nri anụ 2 kachasị mfe iji rie, enwere ike ịkwadebe tupu oge eruo ma ọ dị mkpa ka a kpoo ọkụ n’ụtụtụ. Ma ọ bụ ị nwekwara ike ịme ka anụ ehi esiri esi esi agwakọta ya na obere ọka ọka ma ọ bụ ntụ ọka, gbaa gburugburu ma gbasaa ka ọ ghee, na-akpụ anụ na-atọ ụtọ nke na-adị mfe iji Sanwichi na achịcha. Ị nwere ike tinye ntakịrị ketchup na Mayonezi iji kpalie uto nwa gị.
Iji rie ya na ogbe anụ, nne na-akwadebe ntakịrị kukumba na tomato chara acha iji tinye achịcha maka ụmụaka, nke na-atọ ụtọ nke ukwuu.
6. Nri ụtụtụ nwa na porridge
A bịa na porridge, ndị nne na-eme ihere nke ukwuu n’ihi na ọ na-ewe oge iji sie nri. Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị nwere obere aghụghọ, enwere porridge na-ekpo ọkụ na-atọ ụtọ maka ụmụaka iri nri ụtụtụ n’egbughị oge. Maka ndụmọdụ dị mma, ị nwere ike zoo aka na ndị a:
Nne siri nri porridge n’abali gara aga, hapụ ya ka ọ dị jụụ ma debe ya na ngwa nju oyi.
A na-edozi ihe ndị ọzọ na-esi nri porridge dị ka azụ, ọkụkọ, anụ ezi, wdg, dị iche iche ma ọ bụ sie ya ka ọ zuo oke (dabere na ụdị), echekwara na refrjiraeto.
N’ụtụtụ, nne dị mkpa ka esi nri porridge ọzọ ma tinye ihe ndị a kwadebere tupu ha esi nri, na-esi ísì ụtọ nke dabara na nwa ahụ.
7. Nri ụtụtụ maka ụmụaka nwere efere noodle
Nwa ọ bụla hụrụ noodles n’anya, yabụ ọ bụrụ na nri ụtụtụ nke nwa nne enweghị noodles, ọ ga-abụ nnukwu ndudue. Enwere ike ịkwadebe noodles dị ụtọ maka ụmụ ọhụrụ dị ka nri mmiri, anụ ehi, olu, ma ọ bụ efere eghe eghe. Ma n’ezie, na efere noodle, echefula ịgbakwunye akwụkwọ nri ụfọdụ iji hụ na eriri na vitamin dị mkpa maka nwa ọhụrụ.
Yabụ, ka esi esi nri nri ụtụtụ na noodles ka nwa gị wee rie nke ọma n’etinyeghị oge dị ukwuu iji kwadebe, ebe a bụ ndụmọdụ dị mma iji tinye.
Nne na-ahọrọ ezigbo noodles maka ụmụ ọhụrụ dị ka Udon, Spaghetti dị mma maka ụmụ ọhụrụ. Ọ bụrụ na ịhọrọ noodles ozugbo, ị ga-esi mmiri tupu ịkwadebe ya maka nwa gị.
Nne na-akwadebe ihe eji esi nri ma ọ bụ kpalite ya na noodles tupu oge eruo dị ka anụ ehi, oporo ọhụrụ, fillet azụ na akwụkwọ nri. Kwadebe ihe ndị a iche iche ma chekwaa na friji.
Kwadebe efere tupu oge eruo ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwado nwa gị ofe noodle. Yana ịkwadebe ihendori n’ihu ma ọ bụrụ na ọ bụ efere noodle agwakọta na ihendori.
Mgbe a na-edozi ihe ndị ahụ, ọ na-ewe nanị nkeji ole na ole ka nne ahụ nweta noodles na-ekpo ọkụ na-atọ ụtọ maka nwa ya iji mee ihe.
8. Nri ụtụtụ maka ụmụaka nwere noodles ma ọ bụ pho
Ọ bụrụ na ọ bụ vermicelli, nne nwere ike ime obere vermicelli pulitere maka nwa ọhụrụ ma ọ bụ sie nri vermicelli na obere ọgịrịga. N’ihe banyere pho, ị nwere ike esi nri anụ ehi dị mfe ma ọ bụ ofe noodle ọkụkọ. Ihe ụtọ ndị a niile dị mfe imeri. Ndị nne nwekwara ike ịme noodles e ghere eghe nke onye anaghị eri anụ agwakọta ma ọ bụ ofe noodle ehi e ghere eghe iji gbanwee ụtọ nwa ọhụrụ ahụ.
Ndụmọdụ maka ịme nri ngwa ngwa ndị a yana nke dị n’elu:
Nne nwere ike iji akọrọ noodles, n’ụtụtụ dị nnọọ mkpa ka esi mmiri ọkụ ka nwere vermicelli. Ma n’ezie pho kwa, e nwere ọtụtụ ụdị akọrọ pho na-esi nri na-atọ ụtọ na ngwa ngwa dabere na aha a ma ama nke ezinụlọ na-ahọrọ iji.
A pụkwara ịkwadebe broth mama n’abalị gara aga, hapụ ya ka ọ dị jụụ ma chekwaa ya na friji nke ọma.
Nne nwere ike ime pellet ndị ahụ n’ihu ka n’ụtụtụ naanị tinye ha ka ọ sie nri. Ị nwekwara ike ibu ụzọ sie ya ma ọ bụrụ na ịnweghị oge iji sie ya n’ụtụtụ.
Ọ bụrụ na ị na-eji anụ ehi, biko gburie anụ ahụ nke ọma ma mee ka ọ dị jụụ ka o wee sie ya ngwa ngwa n’ụtụtụ echi.
Ọ bụrụ na ọ bụ ọkụkọ, ị nwekwara ike ịkwadebe ya ma ọ bụ kwadebe ya buru ụzọ debe ya iche.
Ụdị akwụkwọ nri ọ bụla nne na-eji na-adabere na efere a na-eghe ma ọ bụ na-esi nri, bụ́ nke ọ na-akwadebe otú ahụ, kewaa ụdị nke ọ bụla ma debe ya n’ime friji iji kwadebe ya ngwa ngwa n’ụtụtụ.
9. Nri ụtụtụ maka ụmụaka nwere akwụkwọ nri agwakọta, àkwá na anụ
Nke a bụ otu n’ime efere ndị dị mfe ijikọta, dị mfe ịkwadebe na ezigbo nri. Ị nwere ike ịme efere akwụkwọ nri agwakọta, tinye akwa e ghere eghe na ụfọdụ anụ esiri esi / anụ stew.
Banyere akwụkwọ nri : Ị nwere ike họrọ sie ma ọ bụ bu ụzọ butere poteto / ụtọ poteto. Akwụkwọ nri ndị ọzọ enwere ike ịgwakọta ọnụ na-atọ ụtọ nke ukwuu dịka agwa, peas, karọt. Ụdị ndị na-esi ngwa ngwa, nne nwere ike ịkwadebe ha na mbụ ma sie ha n’ụtụtụ. Diced niile na mix na ihendori dabere na uto nke nwa, ma eleghị anya Mayonezi ma ọ bụ utoojoo ihendori, ihe atụ.
Banyere ka esi eme anụ : Nne nwere ike ịhọrọ anụ ezi anụ ezi ma ọ bụ cutlet anụ ezi ma ọ bụ beef, nke na-esi ísì ụtọ. Ọ bụrụ na ọ bụ anụ ezi, ị nwere ike ighe ya ka ọ buru ụzọ sie ya, hapụ ya ka ọ dị jụụ ma chekwaa ya na friji. Ma ọ bụ ị nwere ike ịcha anụ ahụ nke ọma, gbanye ya na ngwa nri ma ghee ya nke ọma. A na m eji anụ ehi na-asa nri ka o wee mee ngwa ngwa n’ụtụtụ n’ihi na a na-esi ya ngwa ngwa.
N’ụtụtụ, nne nwere ike kpoo ọkụ ma ọ bụrụ na a na-esi anụ ahụ, ma ọ bụ sie anụ e tere mmanụ, bee n’ime obere iberibe maka nwa ọhụrụ iji ya na akwụkwọ nri agwakọta.
osikapa e ghere eghe bụkwa nri nri ụtụtụ nke ọtụtụ ezinụlọ maara nke ọma. Ndị nne nwekwara ike ịmepụta ọtụtụ ntụziaka, ọgaranya na uto ka ụmụ ha nwee nri na-atọ ụtọ ma na-edozi nri maka nri ụtụtụ. Osikapa eghe eghe maka ụmụ ọhụrụ na-akwadebe ngwa ngwa n’ụtụtụ bụ osikapa e ghere eghe akwa, osikapa e ghere eghe na osikapa e ghere eghe na shrimp.
Na osikapa e ghere eghe nke akwa, ị ga-agbakwunye akwụkwọ nri ole na ole na ngwa nri iji mee ka efere ahụ dịkwuo ụtọ ma na-edozi ahụ dị ka eyịm, tomato, karọt, peas, kọlịflawa ..
Na minced beef e ghere eghe osikapa, na mgbakwunye na karọt, eyịm, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ agwa, kọlịflawa, ị nwekwara ike iji peas na kukumba.
Site na osikapa e ghere eghe ọhụrụ shrimp, ị nwere ike jikọta cucumbers, karọt, yabasị,…
N’elu bụ nri iri kacha elu maka ndị nne dị afọ 1 iji mee ngwa ngwa. Na-atụ anya mgbe ị gụchara isiokwu ị nwere ike itinye ya n’ọrụ wee nwee ọganihu!
Xem Thêm Top 10 Kẹo Thơm Miệng tốt nhất hiện nay [Tư Vấn Từ Chuyên Gia] | Vbid.vn
Nguy hiểm trong cách sử dụng miếng lót sơ sinh các mẹ đừng nên coi thường | Vbid.vn
Trong thời đại hiện nay thì chắc hẳn các mẹ không còn xa lạ gì với các loại tã hay bỉm cho trẻ nhỏ ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên các sản phẩm cho trẻ sơ sinh thường được nghiên cứu kỹ càng về chất lượng vì da trẻ sơ sinh là da nhạy cảm […]
Nước muối sinh lý cho trẻ sơ sinh loại nào tốt nhất? Cách dùng an toàn | Vbid.vn
Jiri nước muối sinh lý cho trẻ sơ sinh là giải pháp hiệu quả, đơn giản giúp vệ sinh, thanh lọc tai mũi họng, đồng thời giúp ngăn ngừa vi khuẩn, chống viêm đường hô hấp. Nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng an toàn. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu […]
Máy hút sữa Real Bubee | Vbid.vn
Bây giờ, Máy hút sữa điện Real Bubee Nó là sản phẩm bán chạy nhất trên thị trường. Hầu như mẹ Việt nào cũng đã từng nghe đến tên sản phẩm này khi quyết định mua máy hút sữa để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho con yêu. Hãy cùng tìm hiểu lý do […]
TOP 40 Phim Kiếm Hiệp Trung Quốc Hay Nhất Mọi Thời Đại | Vbid.vn